यसरी महिनावारी ठीक समयमा नहुँदा पछि कुनै समस्या त हुँदैन ? - स्वास्थ्य - साप्ताहिक
मेरो पहिलो महिनावारी १२ वर्षको हुँदा भएको थियो । दोस्रो महिनावारी १८ महिनापछि भएको थियो । अहिले पनि मेरो महिनावारी ठीक समयमा हुँदैन । कहिले दुई-तीन महिनाको फरकमा हुन्छ भने कहिले तीन-चार महिनाको फरकमा महिनावारी हुन्छ । यस्तो किन भएको हो ? यसरी महिनावारी ठीक समयमा नहुँदा पछि कुनै समस्या त हुँदैन ?
किशोरावस्थामा महिनावारी सुरु भए पनि अण्डाशय तथा पाठेघरको भित्री तहकोे काममा परिपक्वता आइसकेको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा महिनावारी ढिला हुनु वा केही महिना रोकिनु सामान्य हो । अहिले तपाईं कति वर्षकी हुनुभयो, पत्रमा उल्लेख छैन । सामान्यतः महिनावारी किशोर अवस्था पार गरिसकेपछि आफैं नियमित अर्थात् २१ दिनदेखि ३५ दिन भित्र हुन्छ । तपाईंको महिनावारी ३-४ महिनामा मात्र हुन्छ भने त्यसलाई ओलिगोमेनोरिया भनिन्छ । यो अवस्थामा अन्डाको उत्पादन कम तथा अन्य हार्मोनहरूको कमी भएको हुन सक्छ । तपाईंले स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग परामर्श लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
यो स्थितिमा गर्भ रहने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन ?
संर्घषसँग डराएर हुँदैन ।